20 Taona Aty Aorian’ny Tsy Fanamelohana ny Fanambadian’ny Mitovy Fananahana Ao Ekoatora, Mbola Voasazy Foana Ny Vondrom-piarahamonina LGBTI · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Avrily 2018 16:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Português, Ελληνικά, Italiano, русский, Español
Angatahan'ny fianakavian'ireo voatazona sy voageja tany amin'ireo klinika “fanalàna ny fitiavana olona mitovy fananahana” ny hisian'ny “tolotra” avy amin'ireny ivontoerana ireny sy handoavana vola hitohizan'ny fitazonana ny fianakaviany any anatiny any. Sary fananingoana nataon'i Monica Rodriguez. Nahazoana alalana ny fampiasana azy.
Ity manaraka ity dia famerenana tatitra iray nosoratan'i Carlos Flores, izay nivoaka voalohany tao amin'ny Connectas ary naverina nosoratana niaraka tamin'ny fanampian'ny mpanoratra azy ho ampahany amin'ny andian-dahatsoratra telo izay ho avoaka sy ho adikan'ny Global Voices. Mirakitra fijoroana vavolombelona hafa amin'ny antsipirihany sy fanadihadiana momba ny tsy fanarahan-dalàna izay manamora ny herisetra sy ny fanavakavahana miantefa any amin'ireo olona pelaka sy sarin-dahy / sarim-bavy ao Ekoatora ilay tatitra feno.
Maneho ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo niharam-boina noho ireo ivontoerana milaza fa afaka “manasitrana” ny pelaka ny ampahany voalohany eto ambany eto; handinika ny tsy fahombiazan'ny rafi-pitsarana ny ampahany hafa, eo ihany koa ireo sakana ara-tsosialy izay manelingelina ny fiarovana ny zon'ireo olona pelaka, sarindahy sy sarimbavy ary ireo manana taovam-pananahana roa (LGBTI).
Roapolo taona taty aorian'ny tsy fanamelohana ny fanambadian'ny mitovy fananahana ao Ekoatora, mbola voasazin'ny fiarahamonina foana ny vondrom-piarahamonina LGBTI sady zara raha arovan'ny lalàna. Maka endrika maro ny fanararaotana sy ny fanavaakavahana, ataon'ireo fikambanana izay tsy tratry ny fanarahamason'ny fanjakana. Tazonin'ny sasany amin'ireo fikambanana ireo ny filazana azy ho klinika fanalàna amin'ny zava-mahadomelina; raha ny marina anefa, manao “fitsaboana” ho an'ny fanambadian'ny mitovy fananahana izy ireo, maro ary amin'ny endriny samihafa ireo fanararaotana mitranga any anatin'ireny klinika ireny.
Efa ela no anisan'ilay voalaza fa “fitsaboana hialana amin'ny fanambadian'ny mitovy fananahana” any Ekoatora, araka ny hevitra mihanaka be, ny fampijaliana ara-batana sy ara-tsaina, isan'izany ny fanevatevana, ny fanalam-baraka, ireo sakafo tsy mahasalama, ireo daroka, ny fandorana amin'ny herinaratra, eny fa na ireo “fanolanana ho hanitsiana aza”.
Nahatonga fijoroana amin'ny alalan'ireo asa toy ity an'i Paola Paredes ity ireo fijoroana vavolombelona sasany avy amin'ny niharam-boina, izay namboraka ireo fampijaliana samihafa nihatra tamin'ireo vehivavy tany amin'ireny klinika ireny. Asehon'ireo fijoroana vavolombelona sasany ny fomba fandraisana andraikitra nataon'ireo fianakavian'ny niharam-boina miaraka amin'ireo klinika, sy ny hamaroan'ireo vehivavy entin'ireo fikambanana ara-pivavahana ho ampidirina any.
Mivandravandra toy ny tamin'ny tranga nahazo an'i Jonathan Vásconez, sarimbavy iray izay voatana nandritra ny iray taona sy tapany ary nanandrana nitsaoka ny El Centro La Estancia (The Ranch) ao Patate (Tungurahua) any avaratra andrefan'i Ekoatora, ny tsy fahampian'ny fanarahamaso sy fiarovana avy amin'ny governemanta.
Tamin'izy 23 taona no nanombohan'izany. Efa nanana zanaka vavy izy tamin'izany, ary mbola nampiasa ilay anarana vehivavy izay nomena azy tamin'ny fahaterahany: María de los Ángeles. Nosamborin'ny olona tsy fantatra izy raha iny handeha haka ilay olona niaraka taminy tamin'izany fotoana izany, nodarohana ary nofatorana, niteny taminy izy ireo fa polisy. Niteny i Jonathan fa ny fianakaviany no nanome ny baiko ny hakàna azy tsy araka ny sitrapony, teo ambanin'ny fanamelohana diso hoe mpidoroka zava-mahadomelina izy. Maro ireo fanararaotana sy fampijaliana ao amin'ilay ivontoerana:
Nangataka namana telo izy ireo mba hitsangana sy hitondra barika volontany feno rano, tonga hatreny amin'ny andilako. Teo anelanelan'izy ireo aho, nataon'izy ireo tao anatin'ilay barikan-drano, ny lohako no voalohany, im-balo teo ho eo angamba. Azoko lazaina fa nahita ny fahafatesana aho tamin'izany. Nalain'ny talen'ilay klinika sary tamin'ny finday aho ka notereny hiteny fa naka an-keriny ny zanako vavy, tsy marina izany. Navelan'izy ireo aho rehefa hitany fa ho faty […] Tany aho nandritra ny iray volana sy herinandro, voafatotra teo am-pandriana, ary teny amin'ny tany aho no nasain'izy ireo nisakafo…
Tsy ela dia tafatsoaka i Jonathan, kanefa voasambotra indray noho ny baikon'ny anabaviny.
Eo anelanelan'ny fampiasana ny fivavahana sy ny fandosirana fitsaràna.
Tsy dia miatrika fitsarana matetika ireo klinika sy ireo mpitarika azy, kanefa manjavona sy manova anarana izy ireo rehefa miatrika izany. Maro amin'ireo ivontoerana no mampiasa ny lalàna sy ny fitsipikin'ny fivavahana mba hanomezany rafitra sy tanjona ny asany. Amin'ny tranga rehetra, tsy dia mazava raha mbola manohy miasa ao ambanin'ny anarana hafa na any amin'ny toerana hafa ilay klinika, aorian'ny fitoriana na fidirana an-tsehatry ny fanjakana.
Mandritra izany fotoana izany, maro ireo niharam-boina no tsy mitory noho ny tahotra ny fampijaliana mafimafy kokoa avy any amin'ireo olona nanao tsinontsinona azy ireo tany amin'ny ivontoerana.
Izany no nahazo an'i Luisa (anarana novaina), izay nentina tany amin'iray amin'ireo ivontoerana ireo noho ny fangatahan'ny ray aman-dreniny, izay tsy nety nanaiky mihitsy fa tia vehivavy i Luisa ary indrindra fa hoe tia rahavavy havan-tetezina izy, izay iarahany monina ankehitriny. Tadidiny tsara ny “fitsaboana” azony: misasa vao maraina be ao anatin'ny dimy minitra, mivavaka, ny fampiharana ny fandaharana misy dingana 12 ho an'ireo mpidoroka, ny sakafo tsy zarizary, ary ireo fehezanteny averin'izy ireo aminy isanandro, sady eo amin'ny lohany ihany ny tanan'izy ireo: “Tsy vehivavy tia vehivavy ianao, hotsaboinay ianao ato, tena very hevitra momba ny fiainanao ianao, ho hitanao fa ho tia lehilahy ianao”.
Tamin'izy 24 taona no niaina izany, tamin'ny taona 2012, nandany volana efatra nifampizara tontolo niaraka tamin'ireo vehivavy hafa tia vehivavy. Ny sasany mpidoroka, ny sasany toa azy, tsy mpidoroka. Nody izy rehefa avy nandao ilay ivontoerana, kanefa miaraka amin'ny sainy izay niova tanteraka. Roa herinandro taty aoriana, namerina ny fihetsiny mahery setra tamin'i Luisa ny rainy, ka natahotra izy sao dia ho voampanga indray. Izany no nanapahany hevitra handeha.
Momba ny Hogar Renacer (Espagnol Reborn Home, ilay “klinika” nitazonana azy), tsy te-hanana fifandraisana na kely akory amin'izany intsony i Luisa: “Tsy nitory mihitsy aho, tsy te-hanana olana aho. Karazan'ireo atahorana ireo mpiasa ao.”
Tsy manome ny antsipirihan'ireo tranga voavaha olana na ireo fanamelohana ireo izay fantatra amin'ny anarana hoe “tranga nanamarika” ny biraon'ny mpampanoa lalànan'ny distrika, noho ny haavon'ny tsindry alok'izy ireo amin'ny vahoaka. Na izany aza, nahatoky izy ireo fa nihena ny vokatr'ireo tranga ireo, eny fa na mety tsy mitovy hevitra aza ireo fikambanana sy ireo vondrona ara-tsosialy.
Manamarina ny Fundación Causana (ny Fikambanana Causana), “fikambanana vehivavy tia vehivavy sy miaro ny vehivavy”, izay miady ho fiarovana ireo olona LGBTI, fa teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2017 fotsiny, efa niasa taminà tranga 8 momba ny fisorohana ny fanokana-monina izy. Tsy dia niova firy ny toe-piainana ara-tsosialy miantraika amin'ireo olona izay matetika iharan'ny tranga toy izany na teo aza ny fivoaran'ny lalàna. Ka noho izany, mbola lavitra ny fanakatonana ny boky mandrakitra io olana io i Ekoatora, na voatonona aza fa manokatra ny varavarana ho an'ny fanajana sy ny fitovian'ny rehetra ny lalàna amin'izao.